Waxaa soo gabagaboobay shirkii madaxda Alliansen ee haya talada dalka. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Afarta hoggaamiye ee azxaabta isbaheysiga ee haya talada dalka. Foto: Dan Segerson/Sveriges Radio
Waxaa soo gabagaboobay shirkii madaxda Alliansen ee haya talada dalka.
La daabacay tisdag 26 februari 2013 kl 14.32
Aqalka waalidka haweeneyda ah hoggaanka xisbiga Centerpartiet Annie Lööf ee deegaanka Maramö ee gobolka Småland ayaa waxaa ku soo idlaaday shir ay ku lahaayeen madaxda xisbiyada isbaheysiga ee haya talada dalka.
Hogaamiyayaasha afarta xisbi ayaa ku heshiiyay isla mid ah-sida sammeeyeen labadii doorasho ee ugu dambeysay, taasi oo ah in ay dhisaan kooxo ka shaqeeya shan hadaf siyaasadeed.
Hadafyada shanta ah ee laga shaqeyn doono ayaa kala ah: Shaqada iyo dhaqaalaha, waxbarashada, arrimaha la xiriira shirkadaha iyo deegaanka, xanaanada iyo tan ugu dambeysa oo ah dambiyada iyo ciqaabta siyaasada ku qotonta.
Xisbiyada Alliansen ayaa safaro si wadajir ugu kala bixin doona gobolada dalka iyo sidoo kale in ay qabtaan shirweyne wadajir bisha juun ee sanadka soo socda si shirweynahaasi uu noqodo mid dardar geliya siyaasada Alliensen ka hor doorashada baarlamanka ee bisha Siteember.
Ra'iisal wasaare Fredrik Reinfeldt oo ka mid ah afarta hoggaamiye ee xisbiyada wadaaga ee haya talada oo la hadlay saxaafadda ka dib markii uu maanta soo dhammaaday shirkooda, ayaa sheegay sida ay muhiim u tahay in si wanaagsan la isu diraaiyo si loo helo aragti fog loona helo mas'uuliyad dhammeystiran.